जब नेपाल आइडलमा सन्ध्याले ‘काउली बुढी’ बनेर सबैलाई झुक्काइन्, चित खाए जज ! (भिडियो) – Etajakhabar
जब नेपाल आइडलमा सन्ध्याले ‘काउली बुढी’ बनेर सबैलाई झुक्काइन्, चित खाए जज ! (भिडियो)
काठमाडौः नेपाल आइडल सिजन २ मा एउटा यस्तो प्रतिभाशाली व्यक्ति फेला परेकी छन् । जसले जजहरुलाई नै चकित बनाइदिइन् । आफूलाई ‘काउली बुढी’ नामले जजहरुको अगाडि उनले गीत गाइन् । हाँस्यात्मक शैलीमा उनी प्रस्तुत भइन् । तर जब उनले गीत गाइन् जजहरु नै अलमलमा परे ।
‘तपाई एकछिन बाहिर जानुस हामी सल्लाह गर्छौ’ भन्दै काउली बुढीलाई उनीहरुले विदा दिए । एकछिनपछि सन्ध्या बुढा प्रवेश गरिन् । सुर्खेतकी २२ वर्षीय सन्ध्याले जुन गीत काउली बुढीले गाएकी थिइन् त्यही गीत गाइन् ।
जजहरुले दुईवटा गीत गाउन लगाउदा उनले दुवै गीत काउली बुढीले गाएकै गाइन् । जजहरुले उनलाई यस भन्दै अर्को राउण्डका लागि स्वागत गरे । तर यति भईसक्दा पनि उनीहरुले थाहा पाएनन् कि काउली बुढी नै सन्ध्या बुढा हुन् भनेर । जब उनले काउली बुढीकै लय र स्वरमा तपाईहरुलाई धन्यवाद है, तपाईहरुको जय होस’ भनिन् अनि मात्रै चित खाए नेपाल आइडलका जज ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, भाद्र ०९, २०७५ समय: १२:३५:५९